Zavakanto & Kolontsaina · Avrily, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Avrily, 2012
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Avrily, 2012
<< Nahazo >> Ny Tambajotra Sosialy Ny Zava-dozan'i Almansa
Espaina 30 Avrily 2012
Inona no antony ankalazan'ireo avy ao Valence miteny "catalane" ny 25 Aprily? Fanazavàna.
Iray tamin'ireo tobim-pamaharan'ny Sambo mpisitrika Amerikana tany amin'ny faritry ny Lakandranon'i Panama i Coco Solo, akaikin'i Colón, Panama. Amin'izao fotoana, Coco Solo no tanindrazan'ny sasany amin'ireo mahantra indrindra, ny ankamaroan'ireo Panameana natao an-jorom-bala. Ireo lahatsary anaty aterineto no mba antontan-kevitra vitsy mampiseho ny fiainana ao anatin'ity vondrom-piarahamonina ity.
Italia: Mankalaza Ny Faha-2765 Taonany i Rôma
Italia 26 Avrily 2012
Rôma, ilay Tanàna Maharitra Mandrakizay, izay lasa tena nisy ny anganongano. Rôma, izay ahitana zava-baovao hatrany hojerena. Tanàna (tsotra) i Rôma talohan'ny naha-Fiketrahana Masina (Saint-Siège) azy, vao lasa Repoblika ary ampira avy eo. “Tanàna nanana ny lanjany ara-politika, nanankarena, ary lehibe indrindra teo amin'ny tontolo tandrefana” i Rôma nandritra ny ho efa fitonjato...
Lahatsary : Fananihana An'i Chirripó, Teboka Avo Indrindra ao Costa Rica
Amerika Latina 23 Avrily 2012
Manana kilalao voaangona, saiky vita avy tao Meksika, mihoatra ny iray tapitrisa ny lehilahy iray 65 taona. Nanapa-kevitra ny hanokatra ny tranony ho mozean'ny kilalao ny mpanao maritrano Meksikana Robert Shimizu sy ny zananilahy.
Iran: Herinandron'ny Graffiti-n'Adala Ho An'ny Gadra Politika
Niantso ny rehetra hampiasa stansily ho fanomezam-boninahitra ny gadra politika Iraniana ny vondrona Facebook antsoina hoe Mad Graffiti Week Iran [Herinandron'ny Graffiti-n'Adala ao Iran] ny voalohany ka hatramin'ny fahafito Avrily. Mametraka ny diampeniny eny amin'ny akanjony, fefy, tranony ary izay itafiany ny olona. Nakana hevitra sy tohanan'ny “Mad Graffiti Week” Ejipsiana ity hetsika...
Maraoka: Mihamahazo Vahana Ny Fanoherana Ny Fetibe Mawazine
Mety hampisy fiantraikany [ar] amin'ny fikarakarana ny Mawazine, fetibe maraokana, noho ny toe-javamisy feno tolona isan-karazany manerantany sy noho krizy ara-toekarena. Fetiben'ny hira iraisampirenena fanao isan-taona ao an-drenivohitra maraokana Rabat ary hotontosaina ny 18 ka hatramin'ny 26 Mey [fr] ny Mawazine amin'ity taona ity. Efa nisy ny mpihira iraisampirenena nandray anjara...